Imboni Yemikhiqizo - Abakhi Bemikhiqizo Yase-China Nabahlinzeki Bempahla
Ukufika Okusha kwe-ailboo cigarette ubuhlalu amabhola pop Umshini we-Capsule ozenzakalelayo
I-Automatic Capsule Machine ingumkhiqizo ohlanganisa ibhizinisi, i-automation, ubuhle, kanye nezinketho zokunambitheka okuningi. Igama Lomkhiqizo Umshini We-Capsule Ozenzakalelayo. Usayizi(Plus emaphaketheni angaphandle) 156mm*102mm*49mm. Ukusebenza kahle Sebenzisa izindlela ezisetshenziswa kancane ukucindezela ubuhlalu obuphumayo kugwayi. Ukusetshenziswa Yehlisa iphunga lokubhema futhi wandise ubumnandi bokubhema. I-Material ABS Plastic, Iphedi elingaphansi elingasheleli, Iphakheji ye-Lottery yesakhiwo sePhakheji yokunethezeka okuzimele, ngokuqhuma kokuzikhethela noma okwenziwe ngokwezifiso...
● Ukuphepha: Ibanga lokudla elingu-100% ● Ama-Flavour: Ama-Flavour angaphezu kuka-75 futhi wamukele ukwenza ngokwezifiso ● Ukupakisha:Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zakho. ●Ezokuthutha:Umthumeli wempahla okhulile, ufike ngokuphepha-Sinesitifiketi se-MSDS Amaphilisi ethu aphephile ngo-100% futhi aqukethe ukunambitheka kwemvelo. Ama-capsules ethu aqukethe i-NO silicone!-Igobolondo le-capsule lenziwe nge-gelatin, ngenxa yokuthi ama-capsules emvelo, ngaphandle kwamakhemikhali afana ne-silicone. Uma ungumuntu owazi ukunambitheka okujulile, amaphilisi ayinto nje ...
I-Mint Candy Fresh Breath Custom Ukuhlafuna ushingamu
Ilula futhi elula bekulokhu kuyifomethi yokupakisha uDayang afuna ukuyinikeza amakhasimende ayo. I-Breath Refresher Bead isebenzisa idizayini yebhola eliyindilinga, okwenza ikhasimende lingavinjelwa noma ngisho nokuklwebheka lapho ikhasimende lilibeka emlonyeni. Ukunambitheka okushintshekayo kanye nokupakishwa okuxubile kwenza ukwamukelwa komphakathi kuphakame.
Isihlungi Sesibambi sikagwayi Isihlungi se-Cigarette Capsule
I-Filter Tuber ine-package elula nesezingeni eliphezulu yasemkhathini eyenza abantu babe nolwazi olulula lokuyisebenzisa uma beyisebenzisa. Isengavimba ngempumelelo i-e-liquid ngaphansi kwesisekelo sokuba nobuhlalu obuqhumayo bokusebenzisa intuthu ukuthuthukisa ukunambitheka.
Ugwayi Ugwayi Flavor Menthol ball capsules
Ugwayi onobuhlalu be-pop ubulokhu uyintandokazi yabantu, kodwa intengo ebiza kakhulu ibilokhu iyilokho esicasulayo. Lo mkhiqizo we-Dayang uqondiswe kumakhasimende athanda ubuhlalu obuqhumayo. Ukugcwalisa okulula nokupakisha okulula nokuhle kudumile phakathi kwabathengi. Kukhona ngisho nama-flavour angaphezu kuka-76, okude kakhulu nokwanele. Futhi sisekela amasevisi enziwe ngokwezifiso.